नेपालको संविधान–२०७३ जारी भइसकेपछि राजनीति झन् पेचिलो बन्दै गइरहेको देखिन्छ । तपाईं कानुनको ज्ञाता हुनुहुन्छ । र, पहिलो संविधान सभादेखि नै संविधान निर्माण प्रक्रियामा अनवरत खटिइरहनुभएको छ । कसरी विश्लेषण गुर्नहुन्छ अहिलेको राजनीतिक अवस्थालाई ? हामी थप संक्रमणकालमा नै अगाडि बढ्दै छौं जस्तो लाग्दछ । किनभने कुनैपनि मार्गचित्र स्पष्ट भइसकेको छैन । सबैजना चुनावमा जानुपर्छ भनिरहेका छन् । तर, चुनावमा जाने बाटोलाई निषेध गर्ने खालको राजनीति भइरहेको छ । त्यसकारणले चुनावका जाने भन्ने कुरा नै अनिश्चित छ । त्यसैले संक्रमणकाल थप लम्बिन सक्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ । संसदमा अहिले… पुरा पढ्नुहोस्
तपाईंले निरन्तर सामाजिक न्यायको कुरा गर्दै आउनुभएको छ । यहाँका राजनीति पार्टीहरुले पनि सामाजिक न्यायकै कुरा गर्छन् । के भिन्नता छ तपाईं र उनीहरुले कुरा गर्ने सामाजिक न्यायमा ? उहाँहरुको सामाजिक न्यायको कुरा नारामा मात्रै सीमित भयो । विश्व ब्याड्ढले बडो राम्रो भूमिका खेलेको छ हाम्रो देशमा । कुन अर्थमा भने — हाम्रा राता नेताहरु, ठीकैको राता नेताहरु र निख्खर राता नेताहरुलाई ‘नियो–लिबरल’ बाटो ठीक छ है भनेर सिकाइदियो । उहाँहरु अहिले समाजवादको नारा लगाउनुहुन्छ र ‘नियो–लिबरल पोलिसी’ मा काम गर्नुहुन्छ । उहाँहरुले सधैँ आफ्नो वरपर मात्रै हेर्नुभयो । साँच्चिकै… पुरा पढ्नुहोस्
तपाईं विकास समितिको सभापति हुनुहुन्छ । तपाईंको विचारमा थारु बाहुल्यता भएको क्षेत्र र मधेशमा विकास नहुँनुको कारण के होला ? हाम्रो राजनीति विकासमत्रै भएन । जहासम्म मधेसको कुरा हो । मधेशको सन्दर्भमा विकासको लागि हामीले जुन मात्रामा योजना बनाउनुपर्ने हो, दृष्टिकोण बनाउनुपर्ने हो, जुन मात्रामा त्यहाँको स्रोत साधानको उपयोग गर्नुपर्ने गर्नुपर्ने हो, पूर्वाधार गर्नुपर्ने हो त्यो राज्यको प्राथमिकतामा परेन तर जति परेको छ त्यो पनि सदुपयोग भएन । केही मान्छेको राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्नको लागि विकासलाई प्रयोग गरे । अन्यथा नठान्नुहोला, त्यहाँका राजनीतिक नेता भन्नेहरुले पनि त्यहाँको विकासको कुरालाई बोलेको… पुरा पढ्नुहोस्
नेपालको अर्थतन्त्रमाथि सय जनाको हाराहारीमा, सीमित व्यक्तिहरुको पूर्ण नियन्त्रण देखिन्छ । यो कति सत्य हो ? नेपालको अर्थतन्त्रको प्रकृति कस्तो छ ? पाकिस्तानको अर्थतन्त्र लगभग दुई सय परिवारले चलाउँछन् भन्छन् । नेपालको अर्थतन्त्र कति परिवारले चलाउँछन् त्यो त थाह छैन । तर एउटा सत्य कुरा के हो भने कृषिबाहेक नेपालको अर्थतन्त्रका जति पनि अवयवहरु (पर्यटन, उद्योग, यातायात) छन् ती सबै एक–डेढ सय परिवारको जमातकै अधीनमा रहेको देखिन्छ । यसको विशद अध्ययन कसैले पनि गरेको छैन । अध्ययनकै पनि खासै जरुरत पर्दैन । नेपालको प्रमुख उद्योग, एयरलाइन्स, होटल, ट्राभल एजेन्सी, आयात­­–निर्यातका… पुरा पढ्नुहोस्